Tobnaan milyan oo doollar ayay ku iibsadeen guryaha, haddana kuma faraxsana - Bulsho News
Wiishka guriga oo cilladeysan, daadad iyo buuq aan loo dulqaadan karin, waa keliya qaar ka mid ah cabashooyinka ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah bilyaneerrada deggan mid ka mid ah dhismooyinka ugu qaalisan magaalada New York.
Haatan, dadka deggan dhismaha Park Avenue ee ka kooban 432 dabaq ayaa maxkamad la tiigsanaya maamulka, iyagoo ku eedeynaya inay wax ka qaban waayeen 1,500 cilladood oo dhismuhu leeyahay.
Dacwada ayaa lagu sheegay in cilladaha gurigan “ay khatar geliyeen isla markaana ay dhib ku qabaan” dadka deggan iyo martida.
Dhismahan aadka u dheer ayaa waxaa sanadkii 2015 laga dhisay xaafadda lagu magacaabo Billionaire Row ee Manhattan.
Dadka dhismahan guryaha ka iibsaday waxaa ka mid ah fannaanadda caanka ah ee Jennifer Lopez iyo gacaliyaheedii hore Alex Rodriguez, maalqabeenka Sacuudiga u dhashay ee Fawaz Alhokair iyo xubin ka tirsan qoyska leh shirkadda Jose Cuervo Tequila, sida laga soo xigtay wargeyska New York Times. Guryaha ayaa lagu iibsaday tobnaan milyan oo doollar.
Dacwawaddan oo lagu dalbanayo $250m oo magdhow ah ayaa waxaa Khamiistii loo gudbiyay Maxkamadda ugu Sarreysa New York, waxaana lagu sheegay in dhibaatooyinka dhismaha lagu qabo ay ka mid yihiin qarax koronto oo bishii June dhacay kaas oo koronto la’aan dhigay dadka deggan iyo buuq xad dhaaf ah iyo gariir.
Ilaa 1,500 oo cillado dhanka dhismaha iyo naqshadeynta ah ayay gurigan ku arkeen injineerrada ay shaqaaleysiiyeen guddiga maamulka guriga.
New York Times ayaa soo xigatay mid ka mid ah dadka deggan gurigan oo sheegay in haanta qashinka lagu shubo ee dhismaha ay u qeylineyso “sida bambo” marka la isticmaalo.
Inta badan arrimaha dacwadda lagu xusay ayaa lagu sheegay “kuwo halis ku ah nafta”. Waxaa la sheegay in wiishka dhismaha, tusaale ahaan uu ku kallifo dadka inay muddo saacado ah sugaan.
“Dadka waxay guryaha ku iibsadeen tobnaan milyan oo doollar si ay u helaan. Way ka fog yihiin guryo raaxo leh sida loo ballan qaaday, si kastaba, dadka waxaa laga iibiyay guryo cillado qaba,” ayuu yiri ninkaas.
Shirkadda maalgelisay dhismaha guriga oo ka tirsan Kooxda CIM iyo Macklowe Properties ayaa sheegtay in gurigan uu yahay kan ugu fiican magaalada.
CIM iyo Macklowe Properties kama aysan jawaabin codsiga ay BBC-du u dirtay ee ah inay ka falceliyaan arrintan.
Mareykanka iyo Qaramada Midoobay oo si adag u...